हिमालमा ‘लालुमै’ क्रेज - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
हिमालमा ‘लालुमै’ क्रेज
सुमेरु संबाददाता २८ श्रावण २०७६, मंगलवार ०२:२७
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा आयोजित सांगीतिक साँझमा जब शिव हमाल स्टेज चढेँ, तब उर्लिए दर्शक । शुरुवातमै हमालले ‘लालुमै’ गाएपछि एकाएक दर्शक बसेको स्थानबाट कम्मर हल्लाउन थाले, अनि झुम्यो सल्लेरी । हिमाली भेगमा चलेका लोक कलाकारको चलेका गीतमा नाच्न पाउने विरलै अबसर पाउने जिल्लाबासीहरु लोक गीत मज्जा लिए ।
‘लालुमै’ गाएर नसक्दै वान्समोर पाएका हमालले सोही गीतलाई दोहो¥याए । उनको गीतमा प्रहरी नायव उपरिक्षक पनि छमछमी नाँचे ।
रेर्कडेट गीतमा विष्णु माझी र सन्दिप न्यौपानेको स्वर रहेको उक्त गीतको सर्जक हमाल हुन् । पश्चिमी शैलीको भाका पुर्वेली भेग हिमाली जिल्लामा पनि उत्तिकै मन पराईएको देखेपछि गायक तथा सर्जक हमाल तिनछक परेका थिए । उनले ‘लाउछ माया’ र ‘हावा चल्यो सरर’बोलको गीत पनि गाएँ । ती गीतमा पनि दर्शकले खुलेरै साथ दिए । केहि दर्शकले गाउँदै नाच्दै सेल्फी समेत लिन भ्याए । विरलै देखिने त्यस्ता दृष्य पनि बाक्लो रुपमा देख्न पाईन्थ्यो । उनले भने, ‘दोस्रो पटक सल्लेरीमा दर्शकको अपार माया पाएँ ! खुसी नहुने त कुरै भएन ।’
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान, नेपाल सोलुखुम्बुको दोस्रो जिल्ला अधिबेशनको अबसरमा आयोजना गरिएको सांगीतिक साँझमा अर्का लोक तथा दोहोरी गायक नविन पौडेलले पनि धुम मच्चाए । स्टेज तताउने गायकको परिचय बनाएका उनले ‘हुर्किएको छोरीलाई’ गाउदा हलभित्र रहेका तरुण–तन्नेरी स्वःस्फूर्त नाच्न भ्याए । सामान्यतया नाच्नका लागि पाखुरी तान्नुपर्ने बैशाँलु उमेर समूहका उनीहरुलाई आफ्नै कथाजस्तो लाग्थ्यो, सायद ! त्यसैले पनि केहीले नाचेर साथ दिए त, केहीले ताली बजाएर । गायक पौडेल दर्शकदिर्घामै पुगेर उनीहरुको साथ खोजिरहेका थिए । सोही क्रममा उनले ‘श्रीनगर डाँडैमा’, ‘बोल्न पर्छ ओई’, ‘मन परेरै हो’, ‘जुंगा पलायो’ लगायतका गीत गाए ।
राष्ट्रिय कलाकारको गीतमा नाच्नकै लागि हल प्रवेश गरेका सयौँ दर्शक कृष्ण ‘आँशुृ’, धर्मराज पोखरेल र सुरेश रमण अधिकारीको गीतमा पनि झुमे । गायक पोखरेलले ‘खोटाङ मध्येवसेरी’ र ‘यति कुरा था छ की था छैन्’ गाए भने गायक ‘आँशुृ’ले सालैजो गीतबाट ढल्कीढल्की नाच्न बाध्य बनाए । यूवागायक अधिकारीले रत्यौली गीत ‘रेलैको झ्यालैबाट’ गाएर पुर्वेली दर्शकबाट माया बटुले ।